एक दिनमा कति पानी पिउदा ठिक ? | Kailashkhabar.com
गृहपृष्ठ › जीवनशैली › एक दिनमा कति पानी पिउदा ठिक ?
काठमाडौं । हाम्रो शरीरमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा शारीरिक बनोटको आधारमा पनि फरक हुने गर्दछ । आयुर्वेदका अनुसार हाम्रो शरीरमा भोक प्यास, निद्रा, पिसाब र शौच आदिबाट संकेत पाउने गर्दछ । जब तपाईंलाई प्यास लाग्छ, पानी पिउनुहोस्, हरेक समय यी विषयमा धेरै चिन्ता लिनु जरुरी छैन ।
पानी किन ?
अझै पनि अन्यौल छ कि हामीले पानी किन पिउनुपर्छ भनेर ? शरीरको हरेक कोशिकाको लागि महत्वपूर्ण तत्व हो पानी । जो पोषक तत्वलाई शरीरको विभिन्न ठाउँमा सञ्चार गर्ने एवं त्यसको अवशोषण गर्ने कामको लागि महत्वपूर्ण छ । यसले सास लिने वा मल त्याग गर्ने जस्ता शरीरको विभिन्न क्रियालाई नियमित गर्न मद्धत गर्ने गर्छ । पाचन एवं मस्तिष्क क्रियाको लागि पनि पानी पिउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । पानीले शरीरमा ऊर्जाको स्तर बढाउन मद्धत गर्छ ।
दैनिक २ लिटर पानी पिउँदा ऊर्जाको स्तर ४०० जुल्ससम्म बढ्ने गर्छ । पानी त्यतिबेला धेरै पिउनु जरुरी हुन्छ, जतिबेला तपाईंहरु नियमित वर्क आउटमा निस्कनुहुन्छ । विभिन्न अध्ययनले यो देखाएको छ कि शरीरमा पानीको कमी हुनुको सम्बन्ध ज्ञान र अनुभूतिसँग समेत रहेको छ । साथमा पानी पिउनुले मान्छेलाई कुनै पनि ध्यानमा फोकस गर्न मद्धत गर्ने गर्छ । पानीले पाचन प्रणालीको प्रक्रियासँग जोडिएको एन्जाइमको संश्लेषित गर्न समेत मद्धत गर्ने गर्छ ।
पानी मान्छेको पाचन प्रणालीलाई सामान्य बनाउनको लागि सहयोगी हुन्छ । कब्जियत जस्ता समस्याको घरेलु उपचारको रुपमा पनि पानीलाई लिन सकिन्छ । पानीमा रहेको अपशिष्ट पदार्थलाई शरीरबाहिर निस्कासित गर्नको लागि पनि पानीको सहयोग चाहिन्छ । यसले मललाई बाहिर पठाएर शरीरभित्रको शुद्धीमा सहयोग पु¥याउँछ । पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुले छालामा हाइड्रेसन बढाउन सहयोग गर्छ ।
साथमा यसले छालाको फिजियोलोजी समेत बढी गराउन मद्धत गर्छ । जसका कारण छाला कोमल एवं मुलायम बन्छ ।हरेक दिन कमसेकम आठ गिलास पानी पिउनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । जसले गर्दा तपाईंको शरीर विषरहित, छाला पोषित हुने र हाइड्रेटेड गर्न समेत मद्धत गर्ने गर्छ । तर आयुर्वेदले यसलाई स्वीकार्दैन । पानी एक अनिवार्य तत्व हो ।
तर अत्यधिक पानीको सेवाले तपाईंलाई भोको महसुस नगराउला तर अपच हुने सम्भावना भने धेरै हुन्छ । चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जस्ता शास्त्रहरुले यसबारेमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले शरीरमा जतिबेला प्यास बढ्छ त्यतिबेला पानी पिउन सकिने र त्यो नै पर्याप्त हुने बताउँछन् ।
प्रमाणपत्र तथा प्रशंसा पत्र वितरण
पर्यटन क्षेत्रकाे विकासका लागि होटल सारथीले ल्याउदै नयाँ प्याकेज (भिडियाेसहित)